Home ကဗျာများ မင်းအတွက် ငါတို့ရှိနေတယ်
Menu	HomeGuestbookToday in HistoryNews & Blog FeedsContact Us	သံလွင်အိပ်မက် [Latest]	မျက်နှာဖုံးနှင့် အမှာစာမာတိကာစာဖတ်သူတို့ပေးစာများကဗျာများကာတွန်းများဟာသဆောင်းပါးများအက်ဆေးများဝတ္ထုတိုများပေးစာအင်တာဗျူးစာအုပ်စင်သို့ ကိုသံလွင်ဗေဒင်	သံလွင်အိပ်မက်အဟောင်းများ	အတွဲ(၄) အမှတ်(၁)အတွဲ(၃) အမှတ်(၄)အတွဲ(၃) အမှတ်(၃) (အထူးထုတ်)အတွဲ(၃) အမှတ်(၂)အတွဲ(၃) အမှတ်(၁)အတွဲ(၂) အမှတ်(၃)အတွဲ(၂) အမှတ်(၂)အတွဲ(၂) အမှတ်(၁)အတွဲ(၁) အမှတ်(၁၁)အတွဲ(၁) အမှတ်(၁၀)အတွဲ(၁) အမှတ်(၉)အတွဲ(၁) အမှတ်(၈)အတွဲ(၁) အမှတ်(၇)အတွဲ(၁) အမှတ်(၆)အတွဲ(၁) အမှတ်(၅)အတွဲ(၁) အမှတ်(၄)အတွဲ(၁) အမှတ်(၃)အတွဲ(၁) အမှတ်(၂)အတွဲ(၁) အမှတ်(၁)	ယနေ့216မနေ့က1185တစ်ပတ်အတွင်း4155ယခင်သတင်းပတ်က11734တစ်လအတွင်3း5673ယခင်လက72912စုစုပေါင်း2886080Visitors Counter	Join us in Facebook Facebook Fanbox 1.5.x.0	မင်းအတွက် ငါတို့ရှိနေတယ်	Views : 3161 Favoured : 82
Share မင်းအတွက် ငါတို့ရှိနေတယ် လှမ်းခဲ့ငါတို့ရဲ့လက်တွေ ကမ်းထားတယ်မင်းမသိလိုက်တဲ့ မနက်ဖြန်တစ်ခုက မင်းမိသားစုလေးကို လုယူသွားတာမေ့ထားလိုက်အဲဒီလို.. ငါတို့ မပြောရက်ခဲ့ဘူး။လွှတ်လိုက်ပါတော့ ကလေးရယ်ခြစ်ကုတ်ထားတဲ့ မင်းရဲ့လက်တွေသစ်ခြောက်ပင်ကြီးတောင် ပွန်းပဲ့နေရော့မယ်သွေ့အက်နေတဲ့ ရှိုက်သံသဲ့သဲ့ဟင်းလင်းပြင်တစ်ခုပေါ် တယဲ့ယဲ့ ဖိတ်လျှံကျမင်းရဲ့ အိမ်အပြန်လမ်းလေးလဲအဓိပ္ပာယ်မဲ့ခဲ့ရပေါ့။စာနာနားလည်တတ်ခဲ့ပေမယ့်မျှဝေခံစားဖို့ ခက်ခဲ့တယ်အဲဒီလောက်တောင်မင်းရဲ့ဒဏ်ရာတွေ ပြင်းလွန်းပါတယ်။မင်းရင်ထဲကို ၀င်ကြည့်အပြီးမှာငါတို့ရဲ့ နှလုံးသားတွေအရောင်ပြောင်းသွားတယ်မင်းကြောင့် ငါတို့ရဲရင့်ခဲ့တယ်မင်းကြောင့် ငါတို့ရှက်တတ်ခဲ့တယ်မင်းရဲ့ မတ်မတ်ခိုင် ခြေထောက်တွေအောက်မှာငါတို့ရဲ့ အတ္တတွေ ခွေယိုင်ပြိုလဲခဲ့ပါတယ်။ ကလေးရေဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တို့တွေ ဆက်လက်ရှင်သန်ရမှာပဲလေအလွမ်းတွေကို သတိရခြင်းတွေ အဖြစ်ထားရှိတဲ့အားနဲ့ ရှေ့ဆက်သွားကြမယ်။မင်းမေမေလိုလူကလေးရယ်ငို ခိုဖမ်းလို့ပေး ဆိုတဲ့သားချော့တေးကို မဆိုတတ်ပေမယ့်ငါတို့ရဲ့ ဂစ်တာတွေ အားလုံးမင်းအတွက် ကြိုးညှိထားပါတယ်။မင်းဖေဖေလိုထမင်းဆီဆမ်းနဲ့ ရွှေလင်ပန်းကို ဖိုးလမင်းကြီးဆီက တောင်းမပေးနိုင်ပေမယ့်ငါတို့ရဲ့ ရင်ဘတ်တွေ အားလုံးမင်းအတွက် တံခါးဖွင့်ထားပါတယ်။ မင်းညီမလေးလိုမပီကလာ ပီကလာနဲ့တီတီတာတာတွေ မပြောတတ်ပေမယ့်ငါတို့ရဲ့ အပြုံးပန်းတွေအားလုံးမင်းအတွက် သီကုံးပေးထားပါ့မယ်။အိပ်မက်ဆိုးတွေနဲ့ လန့်နိုးစိတ်ဒဏ်ရာတွေက မင်းရဲ့ ညတွေကို လာခိုးတဲ့အခါမင်းပါးအပ်ခဲ့ဖူးတဲ့ ငါတို့ရဲ့ ရင်ခွင်ကို သတိရကြည့်ပါတဆတ်ဆတ်တုန်နေတဲ့ ရင်ခုန်သံစည်းချက်တွေကကြည်မြတဲ့ ဂီတတစ်ခုအဖြစ်နဲ့မင်းကို ချော့သိပ်ပါလိမ့်မယ်.. ကလေးငယ်။ မင်းအားငယ်ရင် ငါတို့ ပွေ့ဖက်မယ်မင်းဝမ်းနည်းရင် ငါတို့နှစ်သိမ့်မယ်မင်းငိုချင်လာတဲ့အခါ မင်းလက်ကလေးကိုငါတို့ ဆုပ်ကိုင်ပေးထားပါ့မယ်။မင်းအငိုတိတ်အောင် ချော့ဖို့စကားလုံးတွေ ငါတို့ ရှာမရခဲ့ဘူးသုညကို ခါးလည်က ဖြတ်ပိုင်းလိုက်သလိုလောကဓံက မင်းဘ၀ကို ခုတ်ပိုင်းသွားအစားထိုး မရနိုင်ခြင်းတွေကပဲအနာဂတ်အတွက် ပေးထားချက်တွေ ဖြစ်ခဲ့ကလေးရေဘ၀ပေးပုစ္ဆာကိုအဖြေမှန်ထွက်အောင် မင်းကြိုးစားတွက်တဲ့အခါမင်းနောက်လှည့်ကြည့် ကြည့်ပါမင်းအတွက် ငါတို့ရှိနေမှာပါမင်းအတွက် .. ငါတို့ရှိနေမှာပါမင်းအတွက် .. ငါတို့ .. ရှိနေမှာပါ... ။ ။နေဘုန်းလတ်(သံလွင်အိပ်မက်၏ အယ်ဒီတာတစ်ဦး ဖြစ်သူ နေဘုန်းလတ်က နာဂစ်မုန်တိုင်း ၂ နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်အတွက် ဘားအံထောင်အတွင်းမှ ရေးသားပေးပို့လာသည့် ကဗျာ)	Users' Comments Average user rating
Display 11 of 11 comments	1. 19-08-2011 15:00
"သုညကို ခါးလည်က ဖြတ်ပိုင်း
လိုက်သလို" really nice.	Guest
poet	2. 30-07-2011 16:58
် အကို	Guest
ညီ	3. 07-05-2011 01:22
feel together with you.
ko htet kyi	4. 25-06-2010 17:15
နေညို	5. 03-06-2010 23:56
Angel Eyes	6. 25-05-2010 18:46
Remembrance Poem of Nargit
We all never forget that worse attached of Nargit. When was i read ur Poem, renewable pitty sad again to this situation, So Great Remembrance Poem of Nargit with ur Hand write words! thanks you,Bro; Ko Nay Phone Latt! Be Healthy! I wish for you and country of Myanmar!	Guest
Witt Yie	7. 19-05-2010 16:25
pyaryaecho	8. 18-05-2010 14:57
mee chit	9. 11-05-2010 16:39
One for All, All for One Brother... I do remember you.	Guest
su wai	10. 10-05-2010 15:55
Wahh.., it is really touching . Guest
Choapril	11. 09-05-2010 21:00
I would like to send my respect to the writer. I really respect your and your words . I hope you'll be free soon.......	Guest
gorrel	Display 11 of 11 comments
Add your commentmXcomment 1.0.8 © 2007-2013 - visualclinic.frLicense Creative Commons - Some rights reserved	မင်းအတွက် ငါတို့ရှိနေတယ်	Saturday, 01 May 2010 20:16	Currently 3.66/5 12345 Rating 3.7/5 (32 votes) Next >